Akukho mdlalo womntwana - yile ndlela ufumana ngayo i-nursergarten efanelekileyo
Khangela malunga nenkqubo yokwabela indawo
Sebenzisa ithuba lokufundela umsebenzi kwaye uthembele kwisisu sakho
UMontessori, iilwimi ezimbini okanye ukudibanisa inzala? Ukukhetha i-kindergarten efanelekileyo kunokuba lula kubazali abaninzi. Oku kuyingxenye ngenxa yokuba kunzima ukufumana okulungileyo kumntwana wakho ngenxa yobuninzi beengcamango zemfundo. Ngakolunye uhlangothi, kunelungelo lokhetho lokuzikhethela lwe-nursergart eJamani, kodwa oko akuthethi ukuba indawo kwindawo efunwayo ikhululekile.
Awuyidlala yomntwana - yile ndlela ufumana ngayo i-kindergarten efanelekileyo
Ngaphandle koko, njengomama okanye utata, kufuneka ukwazi i-criteria enokuyiqonda ngayo umgangatho wesikhungo sokunakekelwa kwelanga.
Qala kusekuqaleni kokukhangela i-kindergarten efanelekileyo
Ukukhethwa kwe-kindergarten efanelekileyo
Ukuba umntwana wakho uya kwi-nursergart ukususela kwiminyaka emithathu, ukubhaliswa ngokuqhelekileyo kwenzeka phakathi kukaJanuwari noMatshi. Kuze kube ngo-Aprili, ukufumana okanye ukukhanselwa kuya kuthunyelwa. Kwiziko langasese okanye ezixhaswe ngecawa, iifihla zokugqibela zingase zihluke kancinci kulabo base-kindergartens kamasipala.
Ngaba uvumela umntwana wakho phambi kokuba ukhathalelo wokuzalwa yesithathu kwiziko lokhathalelo imini, kuba ufuna ukungena kwiinkalo ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka, kufuneka uqale uphendlo lwakho, kodwa kungcono 12 ukuya kwiinyanga 15 phambi kokuba baqalise umsebenzi phambi kwexesha.
Nangona kunjalo, ngaphambi kokuba ufune i-kindergarten ngenkuthalo, kufuneka uqwalasele oko kubaluleke kakhulu kuwe ekunyamekeleni umntwana wakho. Kunengqiqo ukuqwalasela nomlingani womntwana wakho. Abanamahloni nabantwana abagcinwe, abakade benamava amancinci ngaphandle kokunyamekela, basesandleni esihle kumaziko amancinci anxulumene neqela elinomphela.
Umlingani womntwana wakho unokubaluleka ekukhetheni i-kindergarten efanelekileyo
Ukuba umntwana wakho ubonisa ukuhlola okukhulu, umzekelo, i-nursergart enomxholo ovulekileyo uyaba ngumbuzo. Ukongezelela, njengomzali, kufuneka uqwalasele ukuba yikuphi ukugxila kwezemfundo kubalulekile kuwe. Yonke inkulisa namhlanje isebenza ngokwemiqathango ethile. Ngokuqhelekileyo, ingqiqo ingabonwa kwiziko leziko elifanelekileyo okanye lifumanekayo kubazali abanomdla wokukhuphela.
Abaninzi bee-kindergartens bagxininise ekukhuthazeni umsebenzi womzimba okanye kwimfundo yomculo. Ngaphandle koko, kukho iibergergens ezimbini okanye abo baneendlela zokufundisa ezifana neMontessori okanye iWaldorf imfundo. Imfundo yezenkolo kunye nokudibanisa okuhambelanayo nemigangatho yamaKristu kunye nokuxabisa kubaluleke kakhulu kumaziko aseburhulumenteni.
Akunjalo nje kwilizwe lonke, kodwa yonke idolophu inokuzigqiba ngokwabo ukuba iindawo zontanga ziza kunikezelwa njani. Kwiziko likamasipala, unokuthi ubonise inkulisa yakho endiyithandayo kwifom yobhaliso. Ukhetho luvame ukunikezelwa kubantwana bodwa abangabodwa. Nangona kunjalo, ngokuxhomekeka kubukhulu besihlwele, kukufikelela kwiziphathamandla zolawulo ukukunika indawo kwenye inzala yasekuhlaleni apho uhlala khona. Akukho mvume esemthethweni kwindawo yokunakekela abantwana kwiziko elithile. Konke okufuneka kwenziweyo kukuqinisekisa ukuba bonke abantwana bayaqwalaselwa xa bebeka iindawo.
Nangona ingqiqo yeyona ndlela ingabalulekanga xa umntu onobuchule engaphumeleli ukuyiqhuba kwimihla ngemihla.
Thatha onke amathuba ukujonga iindawo ezikulo mbuzo. Yenza inqaku ngaphambi kwezinto ozinomdla kuzo kwaye ubuze kwindawo. Ngolu lwazi, unokuqhathanisa ngakumbi indawo nganye emva koko wenze isigqibo esona sikhulu kumntwana wakho.
Ngoko ke, qiniseka ukuzisa kunye nabantwana bakho xa ukhangelelene neendawo ezizodwa: Uya kuphawula ngokukhawuleza ukuba intombi yakho okanye unyana wayo uziva kakuhle kwaye uyamkela kwi-kindergarten okanye ayikho. Inqaku lokugqibela kufuneka libe neyona nto ibalulekileyo kwi-kindergarten.
I-kindergarten efanelekileyo inokuqatshelwa ngento yokuba umoya ofudumeleyo uphambili kwaye abantwana kunye nabazali baphathwa ngokuxabisa. Ukusebenzisana phakathi kwabasebenzi bezemfundo kufuneka kuhambelane. Umsebenzi omhle wokufundisa nge-kindergarten uhlala uxhomekeka kwindlela intsebenziswano phakathi kweqela elisebenza ngayo.
Oko kuthethwa, ukusabalalisa kubalulekile. Iziko apho umntwana wakho unakekelwa khona ungena kubambiswano lwezemfundo nawe. Oku kuthetha ukuba, njengomzali, usebenza ne-kindergarten ukuze uhambe kunye nokuxhasa intuthuko yabantwana bakho. Buza ngoko malunga namathuba, indlela abazali abanokufaka ngayo inxaxheba kwi-kindergarten yobomi bemihla ngemihla kwaye bawuqwalasele ngokutyelela kwakho kwizaziso kunye nesalathisi solwazi.
Ekugqibeleni kuncinci, izixhobo zesekondari azibalulekanga. Akukusoloko ifuneka ukuba ibe yintenitshala yangoku, kodwa ingaphakathi elondolozwe kakuhle kwaye isebenzayo ibaluleke kakhulu njengemidlalo yamathambo enentsingiselo. Ukongeza ukwakhiwa. Izinto zokwakha kunye nezokwakha kufuneka zifumaneke imidlalo yebhodi yebhodi, kunye nesitokisi, iincwadi zeemifanekiso kunye nezinto zokudlala imidlalo.
Ukususela ekubeni abantwana abaneminyaka emithathu banemfuno eyahlukileyo kunabantwana abasesikolweni, ukudlala okufanelekileyo kweminyaka kunye nezibonelelo zokufunda akufanele zilahleke, okufuneka uboniswe. Kwakhona, fu manisa ukuba umsebenzi wesikolo wasesikolweni ubonakala njani kwiziko ngalinye. Ukukhuthaza inkxaso-mali kwiindawo zokuxininisa, ukufumana ulwimi nokubhala, ukuzinza kunye nentsimi yokuphuhliswa kwengqondo kubalulekile.
Xa enkulisa elungileyo yonke imibuzo yakho kufuneka iphendulwe ngomonde ngokweenkcukacha. Ukuba oku akunjalo, uza kungcono sihlale sijonge: lokunakekela umntwana olungileyo ukusebenza kuphela xa onke amaqela kusebenza kumdla womntwana kwaye ufuna ukwakha intembelo kwiziko ezifana enkulisa nabazali.
Ndiyifumana njani ibrabhu elungileyo | Umfazi
Iingcamango zabantwana - fumana ukungafani
Iihotele ezinobungqina bentsapho kwiholide
Ngemoto kunye nosapho kwiholide